Rarama Rukova - Sarudza yako Dropshipping Mentors yeDropshipping Course
Chii chinonzi live stream chirongwa?
Iyo iripo rukova chirongwa inogona kubatsira dropshipper kuvandudza shopu yevashanyi kutendeuka. Nekushandira pamwe neCJ, donhwe rinongoda chete kushambadzira zvakajairika kuzvitoro zvega. CJ inopa inorarama timu timu, mhenyu nzizi nzvimbo, uye live mitsara zvigadzirwa. Nekuisa nhepfenyuro mhenyu mune peji reruzivo rwechitoro, vashanyi vezvitoro vanogona kuvandudza kunzwisisa kwavo kwechitoro uye zvigadzirwa uye zvichabatsira vashanyi kushandurwa kuva vatengi vanobudirira, nokudaro vachienderera mberi nekuvandudza mutengo wekutenga kwevatengi.
Nei uchisarudza CJ live nhepfenyuro？
Chii Chiri Kurarama Pamhepo
Iko kukasira kwerukova rwunoita kuti zvirimo zvive zvechokwadi, saka zvinowirirana zvakanyanya nezvinotarisirwa nevatengi zvepfungwa kupfuura echinyakare zvinyorwa, mifananidzo, uye mavhidhiyo. Iyo anchor inogona kuratidza izvo vatengi zvavanoda kutenga. Semuenzaniso, chidimbu chembatya, iyo anchor inogona kuratidza maitiro ekupfeka pamuviri, uye vatengi vanogona kunzwisisa chigadzirwa zvakanyanya intuitively.
Mifananidzo nemavhidhiyo mapfupi anogona kuposherwa zvigadzirwa, asi nhepfenyuro yemukati haigone. Naizvozvo, zvinoonekwa nevatengi ndizvo zvavanowana.
Kubudikidza nerukova rarama, anchor inogona kuratidza chigadzirwa ipapo izvo izvo mutengi anoda kuwona. Kutenga kwemutengi kunogona kukurudzira vamwe, kuwedzera mwero weodha. Semuenzaniso, kana mutengi achida kutenga shangu mbiri, anchor anoipfeka mutsoka, vamwe vanozotengawo ivo pavanoona zvaitika zvakanaka.
Simbisa zvido zvevashanyi vezvitoro uye woita kuti vafarire kutenga. Dzimwe nguva vanongozvitarisa zvisina kujairika, asi kana vachinge vaona kuti chigadzirwa chinoratidzwa neankor chinoshanda kana zviitiko zvakasiyana zvekushandisa zvechigadzirwa zvinoshanda, vachatenga chigadzirwa.
Asati ararama-kutenderera, anodonhedza pasi aida kushandisa mari yakawanda kutora mifananidzo nemavhidhiyo kusimudzira zvigadzirwa. Asi nekutenderera kurarama, isu tinopa mabhizinesi neese yakazara seti yemasevhisi, vhidhiyo, mifananidzo, uye post-kugadzirwa, izvo zvinodhura-zvinobudirira uye zvinoponesa kunetseka. Mushure mekurarama chaiko, isu tine nyanzvi yekugadzirisa timu yekugadzirisa zvirimo mumavhidhiyo madiki. Dropshipper inogona kuisa vhidhiyo muchitoro kana kuiisa kumawebsite evhidhiyo kuitira kuti vatengi vakapotsa rukova rwehupenyu vadzidzewo nezvezvinhu kuburikidza nemavhidhiyo mapfupi.
RICHEMA CHEMAHARA Sarudzo
Isu tine hupfumi hwezvinhu zvekushandisa uye zvigadzirwa zvemhando yezvinhu, pasina kukosha kwekuti vatengi vatumire mhiri kwemakungwa, izvo zvinogona kuchengetedza yakawanda nguva uye mutengo.
NYANZVI MUENZANISO TIMA
Yedu modhi timu inogona kududzira chimwe nechimwe chigadzirwa zvakadzama. Ivo vanogona kupindura tutorials, chigadzirwa chitarisiko, mhando uye imwe mushure-kutengesa mibvunzo.
EXQUISITE VENUE Sarudzo
Zvinoenderana nehunhu hwezvigadzirwa, isu tinoratidza zvigadzirwa zvine akakodzera zvinhu zvekutengesa kuratidza zvakazara chiitiko chaicho uye kushandiswa chaiko kwezvinhu sezvazvinogona.
NYANZVI YEKUSHANDIRA YEMAHARA
Patinenge tichitepfenyura tichirarama, tinokwanisa kuchengetedza kudyidzana kwepamusoro-soro nevashanyi vedu. Uye tungamira vatengi kuisa maodha uye kupedzisa kwekupedzisira kutengeserana.
Tine dzakasiyana siyana dzehunyanzvi kupfura midziyo uye magetsi zvivakwa. Inokwanisa kuratidza zvese zvakadzama nezvechigadzirwa kune vatengi, kuti uwane unonyudza kunzwa.
YAKANAKA YEMAHARA BHUKU
Kwete chete isu zvatinogona kuita online chaiyo-nguva nhepfenyuro mhenyu, asi zvakare chengetedza mavhidhiyo aripo uye oagadzirise mumavhidhiyo ekushambadza ayo vatengi vanogona kusimudzira.
Kubatira pamwe sei?
① Nyorera kubatana
② Tumira email kwatiri
③ Kuongorora kwekambani
⑤ Saina chibvumirano chetatu
⑥ Svika kushandira pamwe
Isa CJdropshipping muhomwe yako
Nyanzvi Kudonhedza Sevhisi
Mashandiro anoita CJ
Ungaita Sei Kudonhedza
Maitiro Ekuisa Kudonhedza Kudonhedza maodha kuCJ
Dzosera, Dzosera uye Dzorera Policy
Kutumira Mutengo uye Nguva Yekutumira
© 2014 - 2021 CJdropshipping.com Kodzero dzose dzakachengetedzwa.